Ring wuxuu ku darayaa laba digniin oo cusub. Ogaanshaha gaarsiinta xirmada iyo digniinta dhacdooyinka caadada u ah | Waxaan ka imid mac
Ring wuxuu ku darayaa laba digniin oo cusub. Ogaanshaha gaarsiinta xirmada iyo digniinta dhacdooyinka caadada u ah
Giraantu waa mid ka mid ah shirkadahaas aan marnaba joojin inay naga yaabiyaan horumarka ay ka sameeyeen arrimaha amniga iyo ilaalinta. Kiiskan shirkaddu waxay ku dhawaaqaysaa hirgelinta dhowr digniin oo caqli badan kaas oo u adeegi doona in la ogaado gaar ahaan meelaha shirkadaha sahayda iyo baakadaha gudbinta ka tagaan amaradayaga albaabka, hoolka ama balbalada. Tani waxay inta badan diiradda saareysaa meelahan, laakiin dhanka kale, digniinta dhacdooyinka shaqsiyeed ayaa sidoo kale lagu daray taas oo noo oggolaanaysa inaan wax ka beddelno ogeysiisyada sida aan u jecelnahay.
Aynu qaybo tagno oo aan ku bilowno tan ogaanshaha gaarsiinta xirmada qWaxay u oggolaaneysaa isticmaaleha inuu helo ogeysiis markaan abuureyno aag gaar ah, sida balbalada hore ama albaabka marka la ogaado in nin geeyo uu ka tagayo xirmadayada. Sidii aan bilowgii ku sheegnay tan Spain iyo dalal badan oo adduunka ah sidaas ma aha, qofka masuulka ka ah keenista dalabkayagu wuxuu garaacayaa jalaska oo inta badan kama tago amarka albaabka. Doorashadan ayaa xiiso u leh waddamada sida Mareykanka tusaale ahaan.
Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay ku daraysaa qaabeynta ogeysiisyada aadka u xiiseeya Xaaladdan, waxay faa iido u yeelan doontaa qaar badan oo naga mid ah maadaama ay na siineyso suurtagalnimada abuuritaanka qalabka baarayaasha shaqsiyeed oo leh Bat Ring Cam Cam Battery oo gaar ah. Kaamirooyinka giraantu waxay shaqaaleeyaan aragga mashiinka iyo barashada mashiinka si ay u kala soocaan laba gobol oo kala duwan oo isla muuqaalka kaamirada ah - sida albaab furan ama xiran - taasina waxay u oggolaanaysaa dadka isticmaala inay helaan digniinta goobahaas.
Tusaale ahaan, inta lagu guda jiro dejinta kaamerada waxaad u adeegsan kartaa barnaamijka Ring si Ku sawir sawirrada wali leh Ring Spot Cam Battery ee albaabka garaashka, waddada ama wax la mid ah marka uu furan yahay iyo marka uu xiran yahay. Adeegsiga tikniyoolajiyadda aragga mashiinnada, sawirradan waxay kaameradda baraan farqiga u dhexeeya furan iyo xiran, si ay u aqoonsato labada gobol waxayna kuu soo dirtaa digniin shaqsiyeed markasta oo aad rabto. Markaa, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato marka xaaladda qaar ka mid ah gurigaagu is beddelo oo aad awooddo inaad soo afjarto shakiga ah inaad albaabka ka tagtay oo furan yahay iyo in kale ka dib markaad guriga ka tagtay.
Digniinahaani waxay ku siinayaan macluumaad gaar ah oo gaar ah oo waxtar leh oo ku saabsan dhacdooyinka ka dhaca hantidaada, iyo adeegsiga aragga kombiyuutarka iyo barashada mashiinka ayaa kuu oggolaanaya inaad dejiso nooca kala -soocidda aad rabto. Digniinaha dhacdooyinka gaarka ah ayaa adduunka oo dhan laga sii dayn doonaa bilaha soo socda macaamiisha Spotter Cam Battery oo leh a Qorshaha Ilaalinta Ring.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Ring wuxuu ku darayaa laba digniin oo cusub. Ogaanshaha gaarsiinta xirmada iyo digniinta dhacdooyinka caadada u ah
Hantida fiilooyinka 96W ayaa gabaabsi ah waxayna dhammaantood tilmaamayaan 16 ”MacBook Pro